महासचिवको उम्मेदवार बन्नु भएको छ किन ?
यस क्षेत्रको विकृती, विसंगतीहरुलाई अन्त गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितमा काम गर्नका लागि मैले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । साना निर्माण व्यवसायीहरु माथि बर्षौ देखिको थिचोमिचो छ । त्यस्तै राज्य र हामी व्यवसायीहरु बीच पनि ठु्लो खाडल छ । मालिक र नोकरको बीचमा हेर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसलाई हटाई सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको अन्तका लागि काम गर्ने हेतुले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईले देखेको यस क्षेत्रको समस्या के के हुन ?
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि हामीले प्रयास नगरेका होइनौ । धेरै प्रयासहरु गर्यौ तर ती प्रयासहरु सफल हुन नसकेपछि हामी निर्वाचनमा होमिएका हौ । मैले अघि पनि भने हामी हाम्रा प्रतिस्प्रधीहरुलाई भन्यौ तपाईहरुले विगतमा संस्थामा धेरै समय विताई सक्नु भयो । तर व्यवसायीको हकहितमा खासै काम गर्न सक्नु भएन । अव तपाईहरुले हामीलाई अवसर दिनुस् हामी केही गर्न चाहन्छौ भनेको हो तर उहाँहरुले संस्थामा बसेर समग्र निमार्ण व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्नुभएन । यहाँ टासी रहनु पर्ने के छ ? त्यही भएर होला सायद उहाँहरुले सजिलै छाड्न चाहनु भएन । विगतमा पनि उहाँहरुले संस्थामा रहेर आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउने बाहेक अन्य खासै काम गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण ठाउँमात्र ओगटेर बस्ने प्रथाको अन्तका लागि हामी निर्वाचनमा होमिन बाध्य भएका हौ । त्यसर्थ यो निर्वाचनले काम गर्ने व्यक्तिलाई संस्थामा पठाउने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।